Kufuridzira Kushambadzira: Nhoroondo, Evolution, uye iro Ramangwana | Martech Zone
Zvemagariro midhiya vanokurudzira: icho chinhu chaicho? Sezvo vezvenhau vakava nzira yakasarudzika yekutaurirana kwevanhu vazhinji kumashure mu2004, vazhinji vedu hatigone kufungidzira hupenyu hwedu pasina izvozvo. Chinhu chimwe chete chekuti vezvenhau vakachinja kuita zvirinani ndechekuti ine demokrasi ndiani anowana mukurumbira, kana anonyanya kuzivikanwa.
Kusvikira nguva pfupi yadarika, taifanira kuvimba nemabhaisikopo, magazini, uye zvirongwa zvepa terevhizheni kutitaurira kuti ndiani aive nemukurumbira. Iye zvino vanhu vanogona kushandisa vezvenhau kuti vazikanwe mundima yavo yekufarira. Kana iwe uchida kuve internet inozivikanwa yezvidzidzo zvekugadzira, pane nharaunda yeiyo!
Izvi zvinoreva zvakare kuti vanhu vanogona kuita raramo nekushandisa vezvenhau. Iwe unogona kuvaka zvinotevera mukati memunharaunda, kuva unozivikanwa nesosi yako yeruzivo munharaunda yakataurwa, uye wozozvizarurire wega kumikana iriko kunze kwekukurudzira zvinyorwa.
Iyi yehupenyu haina isina mirau, zvakadaro, kunyangwe hazvo iri indasitiri nyowani nyowani. FCC inoda kuona kuti vanhu vanoziva kuti vari kutarisa kushambadza, ndosaka iwe uchizowanzoona Sponsored Content akasvetukira pamablog blog kana #ad mune ye Instagram posvo.
Zvakangodaro, vanhu vanowanzo tsvaga zvemagariro venhau vanokurudzira kuvimbika kupfuura vatauriri vemukurumbira vanobhadharwa - 70% yevechidiki vanoti Youtubers inowoneka kupfuura vanozivikanwa, nepo 88% yevanhu vanovimba online kurudziro senge dzavanowana kubva kumhuri neshamwari.
Kuti ataure Seth Godin, Vanhu vanogona "kunhuwidza ajenda yemutungamiri". Izvi hazvina kumbobvira zvave zvechokwadi kana zvasvika pakukurudzira kushambadzira. Kuti uchengetedze vateveri vane hutsinye, iwe unofanirwa kuda uye kutenda mune izvo zvaunotsigira. Mari Smith akataurwa naJohn White, Maitiro Ekukwira kweVanokurudzira SaLilly Singh naAndrew Bachelor Vakavhiringidza Kushambadzira
Dzidza zvakawanda nezvayo shanduko yeanokurudzira kubva kune ino infographic!
Tags: ambassadorbrand ambassadorsmukurumbira kubvumidzwashanduko yeanokurudzirakuchinjakushambadzira kushambadzirainfographicmedia media activencerszvakatsigirwa zvemukatiyoutube influencers
Brian Wallace ndiye mutungamiri we ZvinoSourcing, indasitiri inotungamira infographic dhizaini dhizaini yakavakirwa muLouisville, Ky. uye inoshanda nemakambani anotangira kubva kubhizimusi diki kuenda kuFortune 500. Brian zvakare anomhanyisa chiitiko chemuno kuita Louisville guta rinokwikwidza (#thinkbig) uye akanzi 2017 Google Bhizinesi Nyowani Advisor.